ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား rotary လျှပ်စစ် actuator1 ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား rotary လျှပ်စစ် actuator1
ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား rotary လျှပ်စစ် actuator1
AOX-မေး စီးရီး ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား rotary လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ လေးပုံတပုံ အလှည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ် လျှောက်လွှာများ ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် ဘောလုံးကို, လိပ်ပြာ, ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် တူသော usages.ကျွန်တော်တို့ ပေး လျှပ်စစ် actuaသို့rs ဘို့ အဆောက်အဦးများ, အပင်များ, steelworks, powerအပင်များ,etc. AOX ကွပ်မျက် အေဂျင်စီများ များမှာ ရရှိနိုင် သို့ နောက်ထပ် ထက် 30 နိုင်ငံပေါင်း။ ကျွန်တော်တို့ များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ ထုတ်လုပ် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ကွပ်မျက် AOX-မေး စီးရီး ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား rotary လျှပ်စစ် actuaသို့r တွင် အနိမ့် စီးပွားရေး စျေးနှုန်းများ ဘို့ အဆိုပါ အကျိုး ၏ ကျွန်တော်တို့၏ cusသို့mers. ကျွန်တော်တို့ များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ ပေး ကျွန်တော်တို့၏ dဖြစ်tribuသို့rs နှင့် cusသို့mers နှင့် အဆိုပါ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု။
mounting Flangeï¼က ISO 5211ï¼ï¼ F05 / F07 / F10 / F12 / F14 / F16
AOX-မေးစီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထား rotary လျှပ်စစ် actuator ၏ 1. ရှဲလ်: Hard လူမီနီယမ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ဆန့်ကျင် coated ပြင်ပ epoxy အမှုန့် anodized ။
2. မော်တော်: အထူးဒီဇိုင်း induction motor ကိုမြင့်မားစတင် torque နှင့်အပူကျော်ထံမှထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်အပူကာကွယ်တပ်ဆင်ထားမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် generate ရန်။
AOX-မေးစီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထား rotary လျှပ်စစ် actuator များအတွက် 3. လက်စွဲစာအုပ်အပေါ်မှထပ်:
- အရေးပေါ်လက်စွဲစစ်ဆင်ရေးများအတွက်အော်တို / Manual switchable လီဗာနှင့် handwheel ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု။
- လီဗာဒီဖြစ်ပေါ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ padlocked မဟုတ်လျှင် Drive ကိုအင်အားသုံးအလိုအလျှောက်, မော်တာစတင်များကရောကျလာ။
အသုံးပြုသူများဖို့အရည်အသွေးမြင့် AOX-မေးစီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထား rotary လျှပ်စစ် actuator အာမခံနိုင်ဖို့အတွက်အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးဌာနကုန်ကြမ်းကနေ, နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်ကနဦးအနေဖြင့်လျှပ်စစ် actuator စစ်ဆေးရေးစီမံကိန်းအတွက်အပေါငျးတို့သတူရိယာများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည် high-performance ကိုစမ်းသပ်ကိရိယာများ၏ချောထုတ်ကုန်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်ရန်, အဓိကတူရိယာများပါဝင်သည်: အမျိုးမျိုးသောပတ်ဝန်းကျင်မှာအင်နာလော့တူရိယာ, လျှပ်စစ် actuator ပြည့်စုံစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်, စတာတွေဆားမှုန်ရေမွှားစမ်းသပ်စက်မြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်သောအပူချိန်စမ်းသပ်စက်,
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာ AOX-မေးစီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထား rotary လျှပ်စစ် actuator ၏အသွင်အပြင်ကိုသေချာနှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံကိုပေးနိုင်ပါသည်။
A: ကုန်တင်စသည်တို့ကို, အရွယ်အစားနှင့်သင့်နိုင်ငံသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဒေသ packding, အလေးချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်
Q: တကယ်သင့်ရဲ့ actuator ရဲ့အရည်အသွေးသည်မည်မျှမဟုတ်ကျင့်သောကြောင့်ငါအမိန့်တော်ရှေ့မှာ AOX-မေးစီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထား rotary လျှပ်စစ် actuator တစ်နမူနာ get နိုင်သလား?
hot Tags:: ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား rotary လျှပ်စစ် actuator1, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်